27 Apr, 2018 - 00:04	 2018-04-26T15:39:15+00:00 2018-04-27T00:00:39+00:00 0 Views
MAKADII veKwayedza? Ndinokutendai makandibatsira kuti ndiwanewo anondida saka vari kuramba vachifona apa 0778 701 154 chiregedzai nekuti zvangu zvakaita.
Makadini? Ndiri murume ane makore 33, ndoda mukadzi wekuroora anoda zvemba ane makore 20 kusvika 29 ari pamushonga. Nhare yangu 0782 376 688.
Ndotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 23 ari HIV positive. Andida anondibata pa0771 819 762.
Ndiri murume ane makore 38, ndodawo mudzimai ari pachokwadi ane makore 25 kusvika 35. Andida ngandibate pa0771 125 195.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 28, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi. Zvakawanda totaura panhare yangu 0773 997 216.
Ndiri murume ane makore 46, ndinotsvagawo mudzimai ane makore 40 kusvika 60. Nhare yangu 0775 313 949.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 31 nevana 2, ndinotsvagawo murume ane makore 33-38. Zvizhinji tozotaura panhare yangu 0784 011 917.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume anoda kuroora mukadzi ane mwana 1 kana asina. Ndine makore 40 uye ndoita zvekurima, ngaave ane makore 25 kana 35. Ndiri kwaMutoko, nhare yangu 0783 380 289.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 27, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora kana ane vana vake. Nhare yangu 0772 691 914.
Ini ndine makore 20 uye ndinotsvagawo musikana akanaka wekushamwaridzana naye ane makore 18 zvichidzika pasi. Nhamba dzangu i0777 136 355, ndiri muHarare.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinodawo mukadzi ane makore 22 zvichizika asina chirwere. Ari pachokwadi asingadi zvekutamba ngaandibate pa0774 183 316.
Makadii veKwayedza? Ndokutendai nechido chenyu. Ndakamuwana wepamwoyo saka vose vachiri kufona pa0774 289 101 chiregerai.
Ndiri mudzimai ane makore 46, ndinotsvagawo murume ane makore 46 – 55. Nhamba dzangu 0718 600 367.
Makadii VeKwayedza? Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvaga mudzimai wekuroora ane makore 22 kusvika 25. Zvizhinji totaura pa0784 315 187.
Makadii mhuri yeZimbabwe? Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 21 kusvika 30 anove mupurisa, musoja kane nurse. Ndiri murume ane makore 31, nhare yangu 0738 094 654.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, ndotsvaka musikana akanaka wekuroora ari pachokwadi. Ngandibate pa0715 038 573.
Ndiri murume ane makore 48 nevana 2, ndinotsvagawo mukadzi ane vana vake. Anondida ngandibate pa0777 889 642.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvakawo musikana ane makore 20 kusvika 23. Andida ngandibate pa0771 170 062, moita zvemasms kana kufona totaura.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 32, handina mwana uye ndinotsvakawo mukadzi wekuroora asina mwana, asina kumboroorwa ane makore 18-26. Nhare yangu 0783 996 450.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa. Ndiri kutsvakawo murume ane makore 30 kusvika 35 anoda zvekuroora uye anotya Mwari. Ndine vana 2, anoda nezvangu ngaandibate pa0782 481 428.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 32, ndinotsvaka musikana ane makore 21 – 30. Ndinobatika pa0716 470 070.
Ndinotsvagawo musikana ane makore 18-20 akanaka asina chirwere. Nhare dzangu 0774 273 029.
Ndiri murume ane makore 40 nemhuri yangu, HIV negative uye ndotsvaga mukadzi ari pachokwadi ane mhuri yakewo. Ari muHarare kana padhuze ngaandibate pa0716 051 103.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 21. Nhare yangu 0776 795 909.
Makadii? Tinotenda nechirongwa chino asi ndiri kusangana nematsotsi vasiri pachokwadi. Ini ndiri murume ane makore 41, HIV+ uye ndinotsvaga mukadzi wekugara naye ane makore 41 zvichidzika. Ndinoda kunyanya akafirwa seni, ndinogara pamusha kuChivhu. Ari pachokwadi ndibate 0718 918 303.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinoda kukutendai, ndakamuwana wandaida. Vange vachifona pa0784 898 231 ngavachirega.
Ndakabvira kare ndichinyora asi hapana zvekuita. Ndiri mukomana ane makore 22 ndotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21. Asina chirwere andifarira ngandibate pa0776 269 280.
Makasimba here? Ndiri mudzimai ane makore 34, HIV positive nemwana 1. Ndinotsvagawo murume anowirirana nezvandiri. Ngaandibate pa0783 219 746.
Ndiri murume anotsvaka mudzimai wekuita naye imba. Ngaave ane makore 53 kusvika 57 ari paART. Nhare yangu 0734 903 293.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 39, ndinotsvagawo mudzimai wekumisa naye imba ane makore 25 kusvika 35. Anofarira kugara kumaruwa ngaandibate pa0739 319 435.
Ndiri jaya remakore 23 ekuberekwa, ndinoda shamwari yechisikana anove muAdventist akazvibata. Ndinoita zvemubato yemaoko. Anorevesa ngandibate 0782 058 592.
Makadii veTishawaridzane? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvakawo musikana kana mudzimai ane mwana ari kuda zvemusha. Ndibatei pa0773 740 065.
Ini ndiri murume ane 37 makore, ndodawo shamwarikadzi ine makore 30 – 40 ari pamushonga. Nhare yangu 0772 609 827.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 20, ndinotsvagawo penpal ndinogara muharare. Nhamba dzangu 0782 768 968.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 22 ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 20. Ndiri muHarare. Nhare yangu 0771 817 938.
Makadiiko veKwayedza? Ini ndine makore 31, ndinotsvagawo musikana ane makore 24 kusvika 28 kana ane mwana 1. Handisi pamushonga, adawo nezvangu anondibata pa0785 130 163.
Ini ndiri mukadzi ane makore 19 nemwana 1, ndinodawo murume ane makore 21 kusvika 28. Anoda ngaandibate pa0783 986 195 asi vane vakadzi bodo.
Makadiniko veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 26 ekuberekwa nevana 3, ndinodawo murume wekuita naye musha. Ndinogara kuBocha kwaMarange asi varume vevanhu kwete. Nhare yangu 0783 808 115.
Ndiri mukadzi ane makore 29 nevana vatatu. Handisi pamushonga uye ndodawo murume akavimbika. Nhare yangu 0783 523 824.
Makadini veTishamwaridzane? Ini ndiri mukadzi ane makore 29 nevana 2, hutano ndiri HIV negative. Ndinotsvagawo murume ane makore 30 kusvika 45, akanaka ane vana vake. Ngaave anonamata anoda zvekuroora asina chirwere uye anoshanda aine rudo. Vanoda zvekutamba musafona zvenyu. Vandifarira vanondibata pa0715 419 279.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 21 ndogara muHarare uye ndiri kutsvaga mukomana ave kuda zvekuroora ane makore 25. Ndobatika pa0778 526 632.